NaSpotty iwe unogona kuteerera kune yako Spotify mimhanzi isingaenderane pane iyo Apple Tarisa | IPhone nhau
NaSpotty iwe unogona kuteerera kunze kwenyika kune yako Spotify mimhanzi paApple Watch
Spotify ndeyekutenderera mumhanzi izvo WhatsApp iri kutumira mameseji, rega nditsanangure. Zvinotora nguva yakareba kubvira Apple payakaburitsa nyowani yekuvandudza uye / kana chigadzirwa kumakambani aya kuti aite zvakafanira kugadzirisa. Zvakanaka, inyaya yeSpotify yakaipa nekuti kunyangwe ichida kuchengetedza hushamwari hwekushambadzira mimhanzi masevhisi uye kwete kurasikirwa pasi iyo Apple Music iri kudya nekusvetuka, Pave nemakore angangoita maviri kubvira iyo Apple Watch yakatangwa, uye Spotify haisati yaburitsa Anwendung yeiyo wachi. yeApple. Zvinoshamisa asi ichokwadi.
Luckily ikoko Spotty, yemahara application inobvumidza vashandisi veSpotify kuridza mimhanzi yavo yavanofarira kuburikidza neApple Watch uye pasina kukosha kwekubatana kwenetiweki, kukwanisa kubuda kuti umhanye (kana chero chavanofarira) vachisiya foni kumba)
1 Spotty iri iro iro Spotify rinofanira kunge rakaburitsa
1.1 Mashizha anoshanda sei
1.2 Kukwenenzvera iyo yekupedzisira vhezheni
Spotty iri iro iro Spotify rinofanira kunge rakaburitsa
Kana Apple Music ikapfuura Spotify mukubhadhara vashandisi, ipapo kuchema kunouya, "Ndokusiira iwe," uye iyo "yataifanira kunge takaita ichi kana icho." Asi nguva iyoyo painosvika, vashandisi veSpotify Premium vane zvakare Apple Watch vanga vakamirira kweanoda kusvika makore maviri kuitira iyo mimhanzi yekushambadzira deign yekuburitsa chirongwa cheiyo wachi. Uye zvirinani, zvinoita sekunge vachiri kumirira zvakanaka.
Neraki, Andrew Chang, mudzidzi uye mushandi anoshanda akazvimirira, ave kukwanisa kuzadza gaka rakagadzirwa naSpotify nekugadzira yemahara app inobvumidza vashandisi veSpotify Premium kuenzanisira zvinyorwa zvavo zvekutamba uye maalbham ekuteerera kunze kwenyika. Uye izvi zvakanaka, nekuti iyo nzira yepamhepo inoita kuti zvive nyore kuti vashandisi vasiye madivayiri eImba kumba kana mumota vachiita kurovedza muviri.
Mashizha anoshanda sei
Kunyangwe usiri pamberi pechikumbiro chepamutemo, chokwadi ndechekuti Spotty chirongwa chakazara kwazvo uye chepamusoro-icho icho inoshanda nemhando dzese dzeApple Watch. Paunenge uchinge watora pasi Spotty pane yako iPhone uye waisa iyo app pane yako Apple Watch, iwe unozofanirwa kuvhura iyo app pane yako smartphone uye woipa iyo mvumo yekuwana yako Spotify Premium account. Kana iwe uchinge waipa iyo mvumo, ese ayo playlists uye maalbum anozoonekwa muSpotty interface.
Unogona kusarudza pakati sync playlists kana maalbamu akawedzerwa kune yako Spotify raibhurari, kana chero musanganiswa wezvose zviri zviviri. Nziyo dzese dziri mukati mekutamba kana dambarefu dzichawiriraniswa nekufamba kusiri nyore sekumisikidza switch ye "Syncing newachi" iri mukona yekumusoro yekurudyi yeSpotty interface.
Spotty inoda chaiyo Spotify Premium kupinda mukati kanenge mazuva makumi matatu ega ega kuti zvirambe zvichitenderwa paApple Watch zvisinei neApple Music syncing, Spotty hazvidi kuti iwe uve neako Apple Watch kuchaja kuti uwiriraneNdokunge, iwe unogona kuyananisa playlist kana albha iwe uchienda.
Mimhanzi inogona kuyananiswa ku matatu emhando yemazinga (akajairwa, akakwirira kana akanyanyisa). Uye kana kuyananisa kwapera (iyo nguva ichaenderana nemhando uye huwandu hwasarudzwa), unogona kuisa yako Apple Watch mumhepo isingaite uye teerera kune yako ese mimhanzi mimhanzi usingatore kutora yako iPhone uende nayo.
Kukwenenzvera iyo yekupedzisira vhezheni
Spotty ichiri mubeta, saka ruzivo rwevashandisi haruna kukwana parizvino, asi Chang ari kushanda kuti zviputi zvigadziriswe zvisati zvaburitswa. kuvhura, kwakarongerwa vhiki.
Vaya vakatowana mukana wekuyedza chirongwa ichi, vakaita saJeff Benjamin kubva ku9to5Mac, vanonongedza kuti “ndakanakidzwa zvikuru nechikumbiro uye huwandu hwepolish yainayo kare. "Ndinofunga vashandisi vePrimum Spotify vachanakidzwa nazvo."
Spotty ichave yemahara app uye kana iwe uchida kuziva zvakawanda pamusoro pekuti inoshanda sei, unogona kushanyira iyo Spotty yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » NaSpotty iwe unogona kuteerera kunze kwenyika kune yako Spotify mimhanzi paApple Watch
Chii chakaitika pakupedzisira neapp iyi ..? Ivo havana kuiburitsa?
Iyo inonditungamira ini chinongedzo kune iyo spotify peji .. pane chero munhu anoziva chimwe chinhu nezvazvo?
chero munhu ane chero mhinduro nezvazvo?
Tim Cook: "Isu hatinzvenge mitero"